'पाउरोटी खाँदै घुम्ने पर्यटक हाम्रा प्राथमिकता होइनन्, सय डलर पनि खर्च नगर्नेलाई भिसा नदिउँ'
‘पाउरोटी खाँदै घुम्ने पर्यटक हाम्रा प्राथमिकता होइनन्, सय डलर पनि खर्च नगर्नेलाई भिसा नदिउँ’
कर्पोरेट नेपाल , २६ पुष २०७६, शनिबार, ०७:४२ pm
काठमाडौं । काभ्रेमा जन्मिएका सन्तवीर लामा नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष हुन् । पाँच हजार आठसय मिटरदेखि छ हजार पाँचसय मिटर उचाईका २७ वटा हिमालको प्रवद्र्धन गर्ने संघको नेतृत्वमा उनी विगत दुई वर्षदेखि छन् ।
तेह्र वर्षको उमेरमा चप्पल लगाएर अन्नपूर्ण वेसक्याम्प पुगेको कथा सुनाउने लामा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई नेपालले लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको बताउँछन् । उनको संघले बार्षिक १२ करोड रुपियाँ जति आम्दानी गर्छ र तिनै पर्वतहरुको प्रचार प्रसारमा लगानी गर्छ ।
भिजिट नेपाल २०२०
भिजिट नेपाल भनेको नेपाललाई संसारभर चिनाउने सबैभन्दा राम्रो अवसर हो । नेपालको विकास र समृद्धिको मुल संवाहक भनेको पर्यटन नै हो । त्यसको पनि मुल आधार नेपालका हिमालय हुन् । सन् १९९८, २०११ मा पनि भिजिट नेपाल गरिएको थियो । अहिले २०२० मा सुरु भएको भ्रमण वर्षले राम्रो गर्नेमा उनी आशावादी छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्षले नेपालका चिनिएका गन्तव्यहरुको थप प्रवद्र्धन र नयाँ गन्तव्यहरुलाई स्थापित गर्ने अवसर पनि हो । यसैपाली २० लाख पर्यटक आउँछन कि आउँदैनन् ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । तर लामा चाँही २० लाख पर्यटक नेपाल आउँछन भन्नेमा निश्चिन्त छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० फाइदा लिने समय होइन, खर्च गर्ने समय हो । प्रोमोशन गर्ने समय हो । नेपालले पूर्वाधारमा खर्च गर्ने समय हो । त्यसको प्रतिफल सन् २०२१ देखि प्राप्त हुनेछ । यो वर्षको सफलताले नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ठ पर्यटन गन्तव्य हो भनेर स्थापित गराउन सघाउनेछ ।’
नेपालमा विभिन्न प्रकारका पर्यटक आउँछन् । उच्च हिमाल चढ्ने, पिक (पर्वत) चढ्ने, पाँच हजार आठसय मिटरसम्मका टे«किङ जाने, हेरिटेज, कल्चर, वाइल्ड लाइफमा टे«किङ जाने पर्यटक आउँछन् । त्यस्तै, नेपालमा थुप्रै किसिमका जात्रा पर्व मनाइन्छ । तिनीहरुको प्रोफाइल नै बनाउनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष लामाको दृष्टिकोण छ । अब ‘अफ सिजन होइन, फोर सिजन’ पर्यटनको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ भन्दै उनी संख्या मात्रै ठूलो कुरा होइन, ‘गार्भेज टुरिजम’ले केही हुन्न भन्छन् । क्वालिटी र खर्चालु पर्यटक ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने लामाको भनाई छ ।
एनएमएले के गर्छ ?
नेपाल पर्वतारोहण संघ अर्थात एनएमएले पाँच हजार आठसय मिटरदेखि छ हजार पाँचसय मिटर उचाईका २७ वटा हिमाल हेर्छ । यी हिमाल चढ्ने अनुमति प्रदान गर्छ । रोयल्टी संकलन गर्छ । यिनै हिमालहरुको प्रवद्र्धन पनि गर्छ । नेपालमा यस्ता हिमालको संख्या भने १७६ वटा छन् । तर संघले २७ वटा मात्रै जिम्मा पाएको छ ।
नेपालका ४१४ वटा हिमालको प्रोफाइल बनिसकेका छन् । आठ हजार मिटर अग्ला १४ मध्ये आठ वटा मात्रै नेपालमा छन् भनिएको छ । तर १४ वटै नेपालमै छन् भन्ने लामाको दावी छ । तिनलाई पहिचान मात्रै नगरिएको उनी बताउँछन् ।
कति आउँछन् २७ हिमालमा पर्यटक ?
पर्वतारोहण संघले हेर्ने २७ वटा हिमाल (पर्वत)मा बार्षिक १० देखि १५ हजारको हाराहारीमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । यसपटक नेपाल भ्रमण वर्षका लागि १५ हजारभन्दा बढीलाई चढाउने योजना संघले बनाएको छ । नेपाल आउने एउटा विदेशी औसतमा दुई हप्ता बस्छ । औसतमा पाँच हजार डलर खर्च गरिरहेको हुन्छ ।
छाडा भए पर्यटक
अध्यक्ष लामाका अनुसार नेपाल आउन विदेशी पर्यटक पाउरोटी खाएर दिन कटाउने खालका पनि छन् । एउटा विदेशीले दैनिक एक सय रुपियाँ खर्च गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ भनेर आर्टिकल नै लेखेका थिए । चालिस डलर तिरेर भिसा लिएर एक महिनाका लागि नेपाल छिरेपछि त्यो बीचमा उसले के खान्छ ? कहाँ सुत्छ ? कहाँ जान्छ ? भन्ने विषय नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नहुने उनले अनुभव सुनाए । त्यसरी व्यक्तिगतरुपमा एक्लै आउने विदेशीले खासै पैसा खर्च नगर्ने र देशका लागि पनि केही उपलब्धि नहुने बताउँछन् ।
भुटानले दैनिक २५० डलरभन्दा कम खर्च गर्ने पर्यटकलाई भिसा दिँदैन् । नेपालले पनि त्यस्तै नियम अब बनाउनुपर्ने लामाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘क्लाइम्बिङ, एक्सपिडिसन र ट्रेकिङबाहेकका क्षेत्रमा दैनिक एक सय डलरभन्दा कम खर्च गर्ने पर्यटकलाई भिसा नै दिनु हुन्न । त्यसो गरिएन भने नेपालको पर्यटन ‘गार्भेज टुरिजम’ हुन्छ ।आजका दिनमा एउटा पर्यटकले दैनिक औषत ४४।४५ डलर मात्रै खर्च गरिरहेका छन् । पाउरोटी खाएर नेपाल घुम्ने पर्यटक हामीलाई चाहिएको होइन् ।’
अब यसो गरौं
अध्यक्ष लामा संसारभरका वुद्ध धर्मावलम्बीहरुका लागि जीवनमा एक पटक लुम्बिनी जानैपर्छ भनेर प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । हिन्दुहरुलाई पशुपति, मुक्तिनाथ र जनकपुर जस्ता तिर्थस्थलमा जानैपर्छ भनेर प्रचार गर्नुपर्ने र हिमाल चढ्न रुचाउनेहरुले एक पटक सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्नैपर्छ भनेर अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘यतिले मात्रै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्न, त्यसका साथै पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । बस्नलायक होटल, रेष्टुरेन्ट चाहिन्छ । आवतजावतको राम्रो सुविधाको पनि विकास गर्नुपर्छ । भिजिट नेपाल २०२० सम्पन्न भएपछि राज्यले गुणस्तरका पर्यटक भित्र्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ’, लामाले थपे ।
२०२० पछिको पर्यटन
नेपालले २० वर्षको बीचमा तीन पटक नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गरिसकेको छ । तेस्रो पटक आयोजना भइरहेको भ्रमण बर्ष पक्कै पनि ऐतिहासिकरुपमा सफल हुने उनको आशा छ । लामा भन्छन् ‘हामीले सन २०३० मा कति पर्यटक ल्याउने भनेर पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारमा जुट्नुपर्छ । नीति र बिधि बनाउनुपर्छ ।’
सिक्किममा जनसंख्याभन्दा पाँच गुणा बढी पर्यटक आउँछन् । तिब्बतमा बार्षिक ५० लाख पर्यटक आउँछन् । नेपालमा यति धेरै हिमाल छन, तर पनि बार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउन पसिना चुहाएर बस्नु परिरहेको छ । यो नेपालको दुर्भाग्यलाई बदल्नुपर्ने लामाको निष्कर्ष छ ।
'एक एनआरएन एक पर्यटक' अभियान: कति आउलान नेपाल भ्रमण वर्षमा ?
पर्यटन मन्त्री योगेश भेट्टराईको आव्हानः सामाजिक सञ्जाल मार्फत लोगोको प्रचार गरौं
नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालय र एनआरएनएबीच १७ बुँदे समझदारी
प्रदेश नं ३ मा 'भ्रमण वर्ष २०२०' को शुभारम्भ सौराहाबाट हुने
भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल पार्ने निगमको रणनीति, प्याकेजमा टिकट बिक्रीको व्यवस्था
‘६ हजार कृषि प्राबिधिकलाई तत्कालै जागिर, किसानलाई ५ % ब्याजमा ऋण र नाफा ग्यारेण्टी’
शुक्रबारदेखि सरकारले ८ ठाउँबाट नुन, तेल, चामल र ग्यास बेच्ने
नुन, तेल, चामल, ग्यास लगायतका अत्यावश्यक समान सरकारले आफैं बेच्ने
नेपाल-भारत सिमा जोडिएकै प्रदेशमा आईपुग्यो कोरोना संक्रमण
चैत ९ देखि २१ गतेसम्म सबै कार्यालय बन्द
नेप्सेमा झडपः लगानीकर्ता र ब्रोकर कारोबार बन्द गर्ने पक्षमा, नेप्सेले टेरेन
सेयर बजार पाँच दिन बन्द गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिने धितोपत्र बोर्डको निर्णय
औषधि, मास्क, स्यानीटाइजर निर्यात गर्न नपाइने, भारतबाट आएकाहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने
कोरोना त्रासः नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन सरकारले आर्थिक कार्यक्रम ल्याओस्ः चेम्बर
५० हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउन जुट्यो सरकार, कहाँ कति ?
घट्यो हवाइजहाजको भाडा, नयाँ भाडादर सार्वजनिक, कहाँको कति ?
चालू आवको आठ महिनामा २.६ प्रतिशत आयात घट्दा २२ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात
काठमाडौँमा ‘वाटर एटीएम’: दुई रुपियाँमा तीनसय मिलिलिटर र पाँच रुपियाँमा एक लिटर शुद्ध पिउने पानी
आर्थिक ऐन तथा बजेट कस्तो बनाउने ? राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव